Chii chinonzi Direct Mhinduro Kuteedzera? Maitiro Ekunyora Kopa iyo Inoshandura | Martech Zone
Chii chinonzi Direct Response Copywriting? Maitiro Ekunyora Kopa iyo Inoshandura
China, Gunyana 6, 2018 Chitatu, September 5, 2018 Douglas Karr
Ivhareji chinyorwa hachisi kuzoita. Ini ndinoramba ndichishamisika pandinotarisa misoro yekufarira kuburikidza nekutsvaga uye nemagariro asi pandinotanga kuverenga chinyorwa, zvinongofinha uye hazvina ruzivo. Kana iwe ukavaka mapeji maviri ekumhara pamwe neicho chaicho chaicho chaicho, ini ndinovimbisa kuti iyo yakanyorwa nemunyori munyori wekunyora ichaunganidza zvakanyanya kutarisisa. Pane parutivi noti, ini ndichiri kushuvira kuve munyori mukuru. Ndanga ndichinyora kwemakore gumi uye ndinoramba ndichidzidza.
Koeppel Direct's ichangoburwa infographic, Dhairekita Mhinduro Kuteedzera: Kugadzira Kopa iyo Inoshandura, inogovera zvimwe zvezvakanangana nekupindura zvakavanzika zvekunyora pamwe nenyika yepasirese. Dzidza maitiro ekugadzira mhondi yakanangana nekupindura (DR) nesimba pasina nguva, kana zvirinani kuti vanyori vako vanyori vaunofarira vanoshandisa minwe yavo yemashiripiti kukwiza inotungamira kune ako makuru vatengi.
Chii chinonzi Direct Response Copy?
Kutungamira kupindura mutsara unotsanangurwa pakunyora kana zano rekushambadzira kwaunoda danho rakazara kutorwa. Direct yekushambadzira kushambadzira kana kushambadzira inogara iine kushevedzera kune chiito icho chine nekukurumidza, kuyerwa mhedzisiro. Mienzaniso ingave peji rekumhara uko fomu rakazadzwa kana kubaya-ku-kufona bhatani mhedzisiro mune yekutengesa foni. Kumhara mapeji anogara achishandisa yakananga mhinduro kopi.
Peter Koeppel anonongedzera mashanu akanangana nemhinduro zvinyorwa zvekunyora kuti utange:
Sarudza zvinangwa zvekopi yako. Uri kutengesa shangu here kana kuyedza kuwana mumwe munhu kuti ape kune chakakonzera?
Ronga nzira yako. Iwe uchazadzisa sei icho chinangwa? Yasvika nguva pfupi yekugadzira!
Gadzirira kuratidza kukosha kwako. Gara uchiratidza, usambotaurira, kukosha kwakadii kwauri kuunza patafura. Gadzira rondedzero yenzira dzauchazogadzira shanduko yakanaka kana icho chinangwa chikaita zvawakumbira.
Ronga mapoinzi pane yako rondedzero zvakateedzana kubva zvakanyanya kukosha kune rako rekutanga chinangwa kusvika kushoma.
Chekerera pasi. Bvisa iwo mapoinzi ayo asinganyanyo shanda.
Iyo infographic tsananguro imwe nhanho mune yakazara maitiro ekuronga, kunyora, uye kukwidziridza yako yakananga mhinduro kopi. Iyo inotsanangudza inogadziridza kune yega yega svikiro, kwete chete iko kuda kune chiito Peter anopawo mienzaniso mishoma yekuti shanduko yakapusa muverbiage inogona kukanganisa sei muverengi:
"Mukana”Pane kuti“ Kamwe chete muupenyu. ” Ichokwadi here kamwe chete muhupenyu? Zvichida kwete. Kana zvirizvo, nei uri kuzvitengesa kune mumwe munhu? Pinda pane izvo iwe pachako!
"Discover”Panzvimbo ye" Hazvisati zvamboonekwa. " Uri kutengesa chimwe chinhu, saka ungangozviona, zvirinani mumufananidzo wakatorwa nemumwe munhu aive aripo muhupenyu chaihwo.
"sanganisira"Pamusoro" Kurumidza! " Kunyangwe nguva ichigona kukurudzira, ino yakanyanyoshandiswa zvekuti haina simba. Zvipo zvinopera mumaminetsi mashoma zvakare hazvisi kuenda.
Heano akazara infographic, Dhairekita Mhinduro Kuteedzera: Kugadzira Kopa iyo Inoshandura:
Tags: kuteedzera kunyorakutevedzera fomuramatipi ekunyoractayakananga kopimhinduro yakanangakunanga kupindura mushandirapamweyakananga mhinduro kopisei kutiinfographickoeppel directpeter koeppelchiindeipi mhinduro yakananganamashokokunyora mazano
Ini Handifunge Kushambadzira Ndezvekuita Mari
5 Mazano ekuti Ungashandise Sei ZveMedia Media Vatengi Ongororo